Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan tallaabo taariikhqorihii screen
Taariikhqorihii screen Action waa barnaamij caan ah in la soo saaro si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado shubay screen iyo duubo iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in barnaamijka waa in waxaa loo isticmaali waafaqsan shuruudaha software si ay natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan sida ay dadka u isticmaali kartaa barnaamijka habka ugu fiican si loo hubiyo in gobolka muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay daryeel iyo qanacsanaan.
Top 10 Talooyin ku saabsan taariikhqorihii tallaabo screen
Xal More awood badan daaha la duubay iyo Video
Si aad u xaqiijiso in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa habka ugu wanaagsan waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah talooyin tahay in ay yihiin hoos ku xusan ee la raacay si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican sameeyo:
Duubo 1. HD
Sida tallaabo ayaa barnaamijka ugu fiican si ay u qoraan wax walba sidaas darteed waa in la ogaadaa in user ah waa in la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka feature tahay of HD cabbirka waxaa had iyo jeer u soo jeestay oo ku saabsan si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo ka dhigi state of qaab farshaxan arrintan la xiriira ka. Waxa kale oo hubin doona in cajalado isticmaala ayaa sidoo kale mahadiyo users kale haddii ay uploaded in YouTube si ay u sameeyaan channel ah.
Duubo 2. Desktop
The button duubo desktop waa in sidoo kale waxaa jiri si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo feature ugu horumarsan waxaa had iyo karti si aad u hesho natiijada ugu fiican ee sidoo kale waaxada guud shaqeynta ah ee barnaamijka ayaa lagu iibsaday.
3. gacanta Remote
Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo muuqaal ah oo maamula fog taas oo macnaheedu yahay in user ah waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee ciyaarta tahay waxaa ku riyaaqay iyadoo la kaashanayo maamula fog oo uu soo gundhig gudahood barnaamijka sameeyo iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in shaqada waxaa u suurta si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira sameeyo.
4. duubista Continuous
Shaqada ee duubo Joogta ah waa muujinta ugu fiican in la soo gundhig gudahood barnaamijka. Waxay ka dhigaysa hubiyo in user ka bedelan kartaa dhexeeya desktop iyo ciyaarta iyo kulamada si gooni ah loo diiwaangelin doonaa. Waxaa ugu fiican iyo feature ugu horumarsan ee barnaamijka taas oo mid ka mid ah barnaamijyada ugu horumarsan ee jeer oo dhan ka dhigaysa.
Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in duubo la dhoofiyo qaab kasta oo user ay u baahan tahay iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican iyo adeeg ee ugu sarreeya waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in qaabab loo jecel yahay in waxaa taageera qalabka ugu lagu doorto iyo wixii kaloo la sameeyo.
Halkii dhoofinta iyo markaas uploading videos waxa uu ku taliyay in la hubiyo in badhanka uloading haddii barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in dhufto ee warbaahinta bulshada oo caan ah sida Youtube iyo Facebook waxaa lagu beegsaday si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo duubay waxaa lagu uploaded aan arin kasta.
7. Dual cajalado
User ayaa ka faaiidaysan karaan habkaani si loo hubiyo in ugu fiican iyo barnaamijka ugu horumarsan waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in ay webiyaasha desktop-ka iyo sidoo kale Cam waxaa u arkaan iyo diiwaan toos ah. Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalay barnaamijka kaas oo had iyo jeer u suurta si ay u hubiyaan in durdurrada oo kala duwan oo aan la duubay iyo wakhtiga waa la badbaadiyey. Waxa kale oo hubin doona in user sii socoto si aad u eegto guud ahaan horumarka download iyo sidoo kale dhacdooyinka labada goobaha in arrimaha la xaliyo sida ugu dhaqsaha badan. Habkaani ayaa lagu daray ka dib markii update dhawaan taasi oo tusinaysa baahida iyo doorashada user ee arrintan la xiriira iyo sidoo kale
User waa in la hubiyo in app RCU la soo bixi oo lagu rakibay si ay ula socdaan shaashadda iyo sidoo kale cajalad video fudayd iyo qanacsanaanta dhigi. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijada ugu wanaagsan oo ugu fadhiyo duubo guud ayaa sidoo kale si joogto ah loola socdo. Sidoo kale waa in la ogaadaa in codsiga ka duwan barnaamijka ugu weyn waa lacag la'aan iyo user u xaqiijiso in uu soo bixi la barnaamijka ka dhigi kara.
9. saamaynta mooshin gaabis ah
User ayaa hubin kara in saamaynta dhaqaaq tartiib ah ayaa la qabtay oo ay sidoo kale uploaded isku hab si loo hubiyo in kala duwanaanshaha waxaa lagu darayaa video iyo barnaamijyada la xiriira in ay tahay in la uploaded la. Waxaa ugu fiican iyo feature ugu horumarsan barnaamij uu soo gundhig oo wuxuu hubiyaa in qeyb ka mid ah reyreyn jiro si ay u taageeraan user iyo arrin la xiriira.
Isticmaalka 10. interface
Waxaa jira Casharrada badan internet-ka si loo hubiyo in user helo furaha toobiye si loo hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Tuuryo Kuwani waa in loo isticmaalo si wanaagsan u isticmaasho oo ka mid ah barnaamijka iyo interface la gundhig u leh.
Wondershare Video Convertor Ultimate waa qalab ugu fiican in uu yahay xitaa wax ku ool ah ka dibna taariikhqorihii screen Action ah oo ay tahay oo dhan ay sabab u tahay qodobbada soo socda in barnaamijka ugu wanaagsan ee jeer oo dhan ka dhigaysa:
Taariikhqorihii video waxaa gundhig gudahood barnaamijka ugu weyn taas oo macneheedu yahay in jirin download gaar ah ayaa loo baahan yahay in arrintan la xiriira
Barnaamijka waxaa kale oo ay taageertaa cusub iyo technology ugu horumarsan ee diinta 4K iyo HD habka ugu fiican.
Isticmaalka guud ee barnaamijka waa mid fudud iyo sida tallaabo taariikhqorihii screen ma aha adag oo dhan taas oo ka dhigaysa ugu fiican ee jeer oo dhan.
Oo weliba waxaa lagu qoro waxa ay sidoo kale hubineysaa in tafatirka video ah, duuban, kuwo liita iyo duubo waxaa loo sameeyaa hab ugu fiican.
Xawaaraha barnaamijka si ay u qoraan iyo badalo video ah waa 30X ka dhaqso badan barnaamijyada dhaqanka oo waxa ay taasi ugu fiican iyo barnaamijka ugu horumarsan ee jeer oo dhan.
User ayaa heli kara taariikhqorihii video ah adigoo raacaya taariikhqorihii Jidka Menu> video sida waxaa la muujiyay in tiradaasi kor ku xusan iyo sidoo.
Sidee karaa inaan Radidiyaha duubay GoToMeeting On My Mac?
Sida loo Play AVI in QuickTime
Downloader Godtube: Sida loo Download GodTube Videos ee One Click
> Resource > Video > Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan tallaabo taariikhqorihii screen